Arabia Saodita: Manambatra Ny Heriny Ireo Mpampiasa Twitter Ho Fanaraina Mikasika Ny Mafàna Fo Voafonja · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Marsa 2012 11:48 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, عربي, Italiano, English
@ahmed: Dia nataon-dry zareo tokoa ilay izy RT @blakehounshell: Fotoam-piovàna? Nahazo an'i al-Ahmad, olona iray voafonja, hatao lohahevitra ireo Saodiana mpandefa bitsika.
Araka ny ambaran'ny Human Rights Watch, Al-Ahmad dia voasambotra noho ny fanehoan-keviny taminà lahatsary iray nakariny tao amin'ny YouTube, ny 7 Jolay 2011, nanakiana ny fitànana am-ponja mandritra ny fotoana ela ireo olona ahiahiana nefa tsy misy vesatra iampangàna azy na mba nandalo fitsarana.
Ny fanentanana ao amin'ny Twitter amin'ity alina ity dia ho fanairana mikasika ny famonjàna azy izay niafara tamin'ny fanehoan-kevitra nirarak'ompana, na izany teo ambanin'ny fampiasàna ny anarany Al-Ahmad , na ny tenifototra #justice4YA .
Ilay fanentanana dia tarihan'i @SaudiDetainees, taorian'ny fahombiazan'ny fanentanana voalohany nalefan-dry zareo teo amin'ny Twitter mba hisarihana ny fifantohan-tsain'ny olona mikasika gadra politika iray hafa – 34 taona, Mohammed Albajady, izay efa any am-ponja nandritra ny herintaona, tsy nisy vesatra ary tsy nandalo fitsarana tsy mitanila ihany koa.
@essamz: TSIA, hoy izy, manolona ny tsy rariny. ENY, hoy isika, ho an'ny fahafahany #justice4YA
@Mashi9a7: Rehefa mangataka ny rariny ho an'i Yusuf Al-Ahmad isika, dia mangataka izany ho an'ireo olona rehetra notanana tsy amin'antony. Angatahantsika izany ho an'ireo Islamista tsirairay sy liberaly ary ny Sunnite sy Chiites tsirairay. Ho an'ny rehetra ny rariny sy ny fahalalahana.
Al-Ahmad koa dia mitazona kaonty twitter ato – @yusufalahmed. Ilay kaonty dia mpanohana iray no mitantana azy ankehitriny, izay mibitsika ireo fanavaozam-baovao mikasika an'i Al-Ahmad, ny fepetran'ny famonjàna azy, ary ny toe-pahasalaman'ny reniny efa antitra, izay mararin'ny homamiadana.
Reporters sans frontières dia nametraka an'i Arabia Saodita ho ny fahavalon'ny Aterineto ao anatin'ny lisitra navoakany ho an'ny taona 2012 ahitàna ireo firenena izay manivana ny Aterineto sy manakenda ny fahalalahana miteny. Resaka fotoana fotsiny sisa dia hohitantsika hoe mandram-pahoviana no hitohizan'ny fahalalahan'ireo Saodiana mpiondana aterineto miteny mivantana ety anaty aterineto.